Yusuf Garaad: February 2017
Rasaas in la rido oo lagu dabbaaldego waa laga habboon yahay sababo dhowr ah awgood.
Sababaha waxaa ka mid ah in rasaastu ay lacag ugu fadhido dowladda.
Midda kale, Soomaaliya waxaa saran cunaqabateyn hubka ah oo ay Qarammada Midoobay ku soo rogtay 1992. Mar kasta oo Soomaaliya ay rasaas soo iibsaneyso waa in ay marka hore oggolaasho weydiisataa Qarammada Midoobay.
Intaas oo dhan ka sokow, rasaasta lagu ridayo hawada magaalo cammiran waxay geysan kartaa dhaawac iyo dhimasho.
Qodobka kale ee muhiimka ah, rasaasta la ridayaa waxay khalkhal gelin kartaa amniga.
Dhibka ka imaan kara rasaasa damaashaadka loo rido intaa wuu fara badan yahay laakiin hadda intaas ayaan ku soo koobayaa.
Posted by Yusuf Garaad at 05:04:00
Posted by Yusuf Garaad at 04:45:00
AUN General Maxamuud Muuse Xersi oo loo yiqiin Cadde Muuse ayaa la aasay Talaado. Muu ahayn nin aan aad isu naqaan.
Wuxuu ahaa Hoggaamiye aan is naqaan dhowr jeerna uu xiriir na dhex maray, shaqo ama Soomaalinnimo darteed.
Laba ka mid ah xiriirradaas ayaan midkood kula wadaagayaa, kaas oo aan mar kasta Cadde ku soo xusuusto maaddaama ay wax iiga bidhaamiyeen shakhsiyaddiisa.
Maalin ayaa aniga oo fadhiya Xafiiska BBC ee London waxaan telefoon ka helay shakhsi aanan garaneyn oo ii sheegay in uu joogo Gaalkacyo.
Wuxuu igu yiri mar kasta waxaad sii deysaan siyaasiyiin isku beeninaya in ay ciidammo Ethiopia ahi joogaan gudaha dalka Soomaaliya iyo in kale.
Hadda oo dharaar cad ah waxaa Gaalkacyo dhex maraya baabuur kolonyo ah oo Ethiopian ah oo qaarkood ay jiidayaan madaafiicda goobta.
Hubin ka dib ayaan telefoonka ku dhuftay Cadde Muuse oo markaa ahaa Madaxweynaha Puntland.
Weriyuhu marka uu daliil u hayo run la qarinayo, wareysi adag ayuu qaadaa laakiin ay u fudud yihiin su’aaluhu.
Ma jirtaa, ayaan Cadde weydiiyay, in maanta ay Gaalkacyo yimaadeen ciidammo Ethiopian ah oo hubeysan.
Wuxuu ku jawaabay haa.
Oo maxaa keenay? Wuxuu yiri anigaa u yeertay oo u baahan.
Wareysigii aan filayay in uu noqon doono wareysi adag oo diidmo iyo ku tirtirsiin ah, wuxuu noqday mid aniga igu adag in aan helo su’aalo munaasab ah oo aan weydiiyo.
Qofkii xusuusta Xilligaasi wuxuu ahaa mar aanuu jirin siyaasi Soomaali ah oo ku dhaca in uu qiro joogitaanka ciidanka Ethiopia.
Arrinta labaad qormo kale ayaan ku soo bandhigi doonaa. Insha Allah.
Posted by Yusuf Garaad at 04:36:00